Ọtụtụ mmiri adịghị mma！
Mmetụta dị mkpa mmiri na -enwe na uto osisi: 1. Mmiri bụ akụkụ nke osisi; 2. Ike ijigide ọnọdụ ahịhịa sitere na ya: Mmiri na -esonye na photosynthesis, iku ume, njikọ na irekasị ihe ndị dị ndụ; 3. Mmiri bụ ihe mgbaze maka osisi ...
Kemgbe mmalite nke afọ a, ọtụtụ mba na -ebupụ ngwaahịa na -ebupụ ọka n'ahịa gburugburu ụwa na -ata ahụhụ n'ihi ụkọ mmiri ozuzo, nke nwere mmetụta dị ukwuu na akụnụba ụwa. Dịka ọmụmaatụ, United States na Brazil enwewo oké ọkọchị. Ọka, ọka ...
Mmiri ịgba mmiri, ya bụ, ịgba ogbugba mmiri, bụ ụzọ ịgba ala mmiri dị elu nke na -eji ngwa pụrụ iche gbasa mmiri n'okpuru nrụgide n'ime ikuku, na -akpụpụta ụmụ irighiri mmiri, dị ka mmiri ozuzo, na -agbasasịkwa n'ala a na -akọ ihe ...
1. Mgbe a na -eji teepu ịgba mmiri mmiri n'okpuru ihe nkiri ugbo, n'ihi ìhè anyanwụ, mmiri dị n'elu ga -apụ n'anya, ọ ga -abanyekwa n'ime obere ntụpọ mmiri na ihe nkiri ugbo. Mpekere mmiri ndị a ga -etolite oghere. N'okpuru anya kwesịrị ekwesị na sunlig ...
N'okpuru ọnọdụ siri ike nke nje okpueze ọhụrụ zuru ụwa ọnụ, ihe ngosi 129th Canton Fair bidoro n'igwe ojii n'elekere 9 nke ụtụtụ na Eprel 15, 2021. A ga -eme ngosi ngosi Canton ugbu a site na Eprel 15 ruo 24, ihe ngosi ahụ ga -adịkwa mma. .